Fanampiana ny hopitaly BEFELATANANA | 102 KARA
Fanampiana ny hopitaly BEFELATANANA
Mahavelom-bolo fa misy ny tonga saina ka manampy eo amin’ny fampitaovana ny toeram-pitsaboana. Anisan’izany izao ny orin’asa « vitafoam « .Ireo kidoro natolony dia nahafahana nanolo ny am-pahefatr’ireo efa tena drodroka sy kilaototo tao amin’ny hopitaly.
Kidoro 100 no natolony tamin’izany hanoloana izay tena simba amin’ireo kidoro 450 eo amin’ny hopitaly ary
ezahina haparitaka amin’ny sampam-pitsaboana rehetra eo an-toerana. Ny tena atao lahara-pamehana amin’izany dia ny sampana mitsabo fo sy ny hoza-taitra na ny neurologie, izay tena betsaka tokoa ny marary.
Nankasitraka sy nisaotra tamin’izao fanomezana izao ny Profesora Mamy RANDRIA, lehiben’ny hopitaly Befelatànana no sady nanainga indrindra koa ny rehetra izay afaka manolotra fitaovana toy izao, satria na dia ny farafara ihany koa aza, hoy izy, dia efa maro no mitongilana sy efa tapa-tongotra mihintsy ka mila fanamboarana na soloina mihintsy. Matoky ny fahatsiarovan-tenan’ny rehetra izahay ka hanamarina hatrany ilay fiteny malagasy feno fahendrena manao hoe : NY VOIN-KAVA-MAHATRATRA «
9 août 2013 - 4 h 43 min Divers 1338 vues